Mazuva makumi maviri nemuchengeti Ricciardi, naMaurizio de Giovanni. | Zvazvino Zvinyorwa
Mazuva makumi maviri nemuchengeti Ricciardi, naMaurizio de Giovanni.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Maurizio de Giovanni uye muchengeti wake Ricciardi
Nekuti ndiyo yanga iri nguva yakashandiswa mukati hexalogy yakanyorwa na Maurizio de Giovanni. Mwanakomana wake anozivikanwa kwazvo, Commissioner Luigi Alfredo Ricciardi, yatora Ndira mune kumwe kwekutanga kusingakanganwike kwegore chairo rekunyora. Nhanhatu nano isingasviki mwedzi. Uye pasina kuvadya. Kungozvibvumira kutakurwa ne inononoka uye inoshamisa runako prose wemunyori uyu.
Commissioner Ricciardo, Sargeant Raffaele maionne, mutevedzeri wemukuru Angelo Garzo uye yake lackey Ponte, Livia vezzi, Enrica Colombo, Musikana mudiki, iyo inofadza tata Rosa… Uye guta rakanaka re Naples, wandinofarira kuziva. Iyo Naples yemakore 1931 uye 1932zvinova a humwe hunhu uye chimiro chakakodzera yenyaya dzavo, hukama, mhosva uye zvakavanzika. Hazviite kuti usatsaure chinyorwa kwairi. 100% inokurudzirwa kubva ikozvino zvichienda mberi, ndinozviongorora nekuzvipira.
Maurizio de Giovanni munyori weNeapolitan akaberekerwa mu 1958. Akashanda kwakawanda kwehupenyu hwake mu banking sector, kusvikira a makore 50 akafunga kuenda nezvaainyatsoda: kunyora. Saka akatora kosi mukunyora zvinyorwa uye vaaidzidza navo vakatumira imwe yenyaya dzake kuna a makwikwi. Nyaya yake ndiyo yakahwina uye zvakamupa mukana wekuisa musoro wake munyika yekutsikisa.
1 Luigi Alfredo Ricciardi
2 Hexalogy yaKomishinari Ricciardi
2.1 Nguva yechando yaKomishinari Ricciardi
2.2 Chitubu chaKomishinari Ricciardi
2.3 Zhizha raKomishinari Ricciardi
2.4 Iyo Autumn yaKomishinari Ricciardi
2.5 Nemaoko angu - Kisimusi yaKomishinari Ricciardi
2.6 Uye zvese zviri muhafu yechiedza
De 31 makore, rakasviba, ine mupendero unopandukira usingambovhara ngowani uye nemaziso akasvibirira, Ricciardi ari munhu akaparadzaniswa nenyika nekusununguka kwake. Uye nesimba risinganzwisisike, kana kuti ndoda kutuka, nhaka kubva kuna mai vake: ona chiratidzo chekupedzisira uye unzwe mazwi ekupedzisira evakabatwa nerufu rwechisimba. Chipo ichi chinomutendera kuti anyatsozvinyudza mukuferefetwa kwenyaya, asiwo kugovana chikamu cheiyo kurwadziwa wekuti ndiani akafa.
Ndokusaka ari murume we kunyarara, kusurukirwa uye neara yezvakavanzika zvinoita kuti munhu wese asavimbe. Anoedza kurarama pakati penyika mbiri uye anonzwa asingakwanise. Nekudaro, kuda kwake nebasa uye gara kure nemanzwiro api neapi. Ndizvo kubva kumhuri yakanaka uye ane nhaka huru isingamufarire. Iye anogara nasekuru vake-sekuru Rosa, atova nemakore makumi manomwe, anomuda zvakanyanya sekunyunyuta kwake nekumuona ari ega uye asingafarire izvo zvakakosha: kugadzira mhuri.
ZveRicciardi rudo nenzara ndiwo mavambo ezvese zvakaipa. Asi haizokwanisi kutiza zvachose rudo. Nekudaro, mumabhuku ese matanhatu, tinomuona achikundwa nekukwezva kwemukadzi mudiki anobva kumhuri yakanaka. Enrica ColomboAsina kuroora uye anonyara, iye muvakidzani wake mhiri kwemugwagwa uye Ricciardi akamusora usiku hwese nepahwindo kubvira rimwe zuva paakamuwana achimusungisa. Asi isu zvakare tinoona iye ari chinhu cherudo rwemumwe mukadzi akasiyana zvachose naEnrica: anoshamisa Livia vezzi.
Squire e Mubatsiri waRicciardi asinganeti ndiyo Sajeni Raffaele Maione. Ane moyo uye akakura, Maione anogara achitarisa chero dambudziko riripo naRicciardi. Akaratidzirwa nerufu rwemwanakomana wake wedangwe, zvakare mupurisa, anokoshesa Ricciardi zvakada kufanana nemwanakomana akarasika iyeye. Ivo vaviri vanogovana ruvengo kune mukuru wavo asingakwanise, Deputy Chief Angelo garzo, anogara achiteverwa nemubatsiri wake, mumiriri isa.
Uye zvimwe sekondari huru Chemhondoro Musikana mudiki, Maione anodakadza chivimbo akachinjika. Kana chiremba anoongorora Bruno Mode, kutaura, anti-fascist uye yehukuru hwevanhu. Nguva dzose mukutsinhana kusingagumi kwezvisingaiti naRicciardi, vese vane rudo, rukudzo uye vanobatsirana.
Dzakatenderedza, Naples mu nguva yepamusoro yefascism, uko urombo neupfumi zvisingazivikanwe kubva kune zvakanyanya uye zvinouraya zvakanyanya.
Hexalogy yaKomishinari Ricciardi
Hexalogy yaCommissioner Ricciardi.
Set in mwaka mina yegore, Kisimusi neIsita. Ivo vanopa iyo kunyengera yezviitiko, asi zvakare a hombe uye hwakadzama tsika fresco yehupenyu muNaples mumakore iwayo.
Nguva yechando yaKomishinari Ricciardi
El Tenor Arnaldo Vezzi, anoyemurwa zvikuru uye shamwari yepedyo yaMussolini, anopondwa noutsinye mumakamuri ekupfekedza eTeatro San Carlo muNaples. Asi Vezzi aive asiri waaitaridzika. Chirikadzi yake, akanaka Livia vezzi, ichatorwa nemuchengeti akachengetedzwa.
Chitubu chaKomishinari Ricciardi
Carmela Calise, chembere inogara mufurati inosiririsa uye ichirarama semuoni, inowanikwa yakafa, kusvibiswa nekurohwa. Ricciardi achaongorora rake vatengi vazhinji yemamiriro ese. Mumwe wavo anozobuda ave muvakidzani wako Enrica Colombo, zvakare muchivande murudo naye uye ndiani anoziva kuti anomutarisa husiku hwese.
Zhizha raKomishinari Ricciardi
MaDuchess eCamparino, mukadzi akanaka uye ane makuhwa, anoita kunge akafa mumba make. Iye Commissioner achiongorora, Enrica anofanira kuzeza kuzeya nemusungwa akamisikidzwa nemhuri achitarisa kudanana kwaLivia Vezzi naRicciardi.
Iyo Autumn yaKomishinari Ricciardi
Chakaomesesa uye chinotyisa zvangu. Rufu urwu, sezviri pachena nenzara, rwemwana rwunokatyamadza Ricciardi, iyo isingatendi kuti ndiyo iri kukonzera. Kuferefetwa kwenzvimbo inochengetwa nherera kwaigara mukomana nemamiriro ezvinhu nevanhu vakamukomberedza kunotungamira kune kunokatyamadza uye kwakapotsa kwave nenjodzi kuna Ricciardi.
Nemaoko angu - Kisimusi yaKomishinari Ricciardi
Ino nguva iri mhosva mbiri, uyo wemusoro wemasoja echiFascist nemukadzi wake. Zvekare, kune vakawanda vanofungidzirwa, asi mupari wemhosva achange ari padyo zvakanyanya kupfuura zvinoita.
Uye zvese zviri muhafu yechiedza
Gara mu Isita ya 1932, ndezve iyo kuuraya hure rine mukurumbira yeiyo inowanzo shandiswa brothel muNaples. Kutsvagisa kuchasanganiswa ne mira chiremba nzira and the rudo rune hanya yevakadzi vaviri vanoda Ricciardi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mazuva makumi maviri nemuchengeti Ricciardi, naMaurizio de Giovanni.
Ndinovimba vanoiburitsa muhomwe uye ndinovatenga
Mariola Diaz-Cano Arevalo akadaro
Zvakanaka, tiudze kana uchivada, Ricardo. Ndatenda zvikuru nemhinduro yako.
Pindura Mariola Díaz-Cano Arévalo
Mhando Dzakanaka. Iwe unogona kutakura raibhurari yakazara mune diki gadget iyo isingareme kana kutora nzvimbo. Mune yangu ini ndinotova nayo, kune ziso reyakanaka cubero, anenge mazana matatu!
Ndinovimba vacharamba vachitsikisa nyowani, nekuti kuItaly kune mamwe mazita anodarika matanhatu evanodiwa Ricciardi
Ndinovimba kuti zvakare, Luis, kuti zvimwe zvinoburitswa. Ndatenda nekutaura kwako.
Ini ndinogara kuMontevideo, URUGUAY, ndakaverenga ese mabhuku aCommissioner Ricciardi uye ndakawana ari akanaka. Ini ndinogara ndichitarisa kuti ndione kana akaenderera nateedzero, asi ini ndinoona kuti haana. Ini ndaifunga kuti mushumo wacho wakanaka kwazvo.
Pindura kuna Myriam
Myriam martinez akadaro
Pindura kuna Myriam Martinez
Mitsara yekuyeuka Jose Luis Sampedro